Otu esi emeso ndị debanyere aha siri ike na akaụntụ YouTube azụmahịa gị - SoNuker
Ịgba ọsọ YouTube maka azụmahịa nwere ike isi ike mgbe ụfọdụ, yana ọbụna mgbagwoju anya mgbe ị hụrụ ọnụ ọgụgụ ndị debanyere aha gị rapaara n'otu ebe. Ọbụna nke ka njọ, ị nwere ike na-efunahụ ndị debanyere aha mgbe mgbe.
Ihe ịma aka ọzọ a na-edozibeghị bụ imegide ndị debanyere aha YouTube siri ike. Ọ bụghị onye ọ bụla debanyere aha na ọwa gị chọrọ ịhụ ka ị tolitere. Ụfọdụ nwere ike iji nlebanya na-adịghị mma tụọ ọdịnaya gị wee mebie onyonyo ika gị.
Yabụ kedu ka ị ga-esi nweta ihe ịma aka ndị a wee mee ka ọwa gị too? Nke ahụ bụ ihe anyị ga-atụle taa.
Otu esi emeso ndị debanyere aha troll
Tupu ịbanye na ndị debanyere aha troll, ị kwesịrị ịghọta ụdị abụọ nke ndị debanyere aha nwere ike na-emerụ ọwa gị (ọ bụghị n'ezie ma ọ bụrụ na ị maara ihe ị ga-eme).
Ndị debanyere aha spam: Ndị debanyere aha spam adịghị emerụ ọwa azụmahịa YouTube gị n'elu, mana ọ nwere ike mee ka ahụmịhe mmekọrịta dị njọ maka ezigbo ndị debanyere aha na ndị na-eso ụzọ gị. Ka anyị na-agagharị na nkwupụta YouTube, anyị na-ahụkarị okwu spam na-abụkarị NSFW. Maka akaụntụ azụmahịa, ọ bụ nnukwu nsogbu na-atụle ọnụọgụ ọnụọgụgụ nke ndị mmadụ na-ekiri vidiyo ndị a. Ị gaghị achọ ịhụ ụdị nkwupụta a na vidiyo maka ngwaahịa ụmụaka ma ọ bụ ọdịnaya agụmakwụkwọ. Okwu ndị dị otú ahụ na-akpasu iwe n'agbanyeghị ihe vidio a na-ekwu.
Okwu na-adịghị mma: Ụfọdụ kwuru abụghị spam na-enweghị uche. Kama, a na-ezubere ha iji mee ka ọwa gị pụta na ìhè adịghị mma. Ịnagide okwu ndị a dị iche na ịmekọrịta okwu spam ebe ọ bụ na ha na-enwekarị ezigbo uru. Agbanyeghị, nsogbu na-akawanye njọ ma ọ bụrụ na nkwupụta ndị a enweta ọtụtụ mmasị na nzaghachi. Ị ga-ahụ na mberede ngalaba nkọwa na-akatọ akụkụ ọ bụla nke vidiyo, ika, na ọbụna azụmahịa. Ọ bụrụ na echekwaghị ya, ọ nwere ike inwe mmetụta jọgburu onwe ya na ọwa gị.
Kedu ka esi emeso ndị debanyere aha siri ike?
Ọ bụrụ na ị na-ekwu okwu spam, enwere ihe ole na ole ị nwere ike ime ozugbo na YouTube Studio.
1. Ị nwere ike ịkọ akụkọ ndị a mgbe niile dị ka spam. Ozugbo i mere nke ahụ YouTube ga-enyocha nkọwa ahụ ka ọ hụ ma ọ ruru eru dị ka spam. Ọ bụrụ na ọ bụ, a ga-ewepụ ya na ngalaba nkọwa.
Otú ọ dị, ọ nwere ike isi ike ịkọ akụkọ spam ọ bụla n'otu n'otu ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ na ngalaba nkọwa gị. Maka nke ahụ ị nwere ike:
2. Debe okwu niile maka nyocha site na ntọala YouTube Studio gị. N'ụzọ dị otú ahụ, ha ga-apụta naanị na ngalaba nkọwa mgbe ị kwadoro ha.
3. Nhọrọ nke atọ kwesịrị idobere maka ikpe ndị na-adịghị ahụkebe: gbanyụọ okwu na vidiyo gị kpamkpam.
Ịnagide mgbasa ozi ọjọọ
YouTube Studio anaghị enye ihe ọ bụla ga-enyere gị aka ịgbanarị okwu ọjọọ. Ọ bụrụ na ị kọwapụta okwu ọjọọ na-abụghị spam, enwere ike machibido gị na YouTube. N'okwu a, ị ga-eji akọ na ịkpachara anya gaa n'ihu.
Soro ndị na-ege gị ntị nwee mmekọrịta
Ọ bụrụ na ị hụ okwu na-adịghị mma, tụlee ịza ya nke ọma. Ọ na-enye echiche nke akaụntụ azụmahịa na-echebara echiche na nke na-eche banyere ndị ahịa ya. Ị nwekwara ike zụta ihe YouTube nke na-ekpughe ụgha nke okwu na-adịghị mma na-etinyeghị aka na ha dị ka onye okike.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ ihe ndị yiri nke ahụ na-adịghị mma n'ọtụtụ vidio, lee ma ọ̀ dị njọ na otú i nwere ike isi dozie ya. Ọ bụrụ ogo mmepụta ma ọ bụ izi ezi nke ọdịnaya, ị nwere ike ịmụta mgbe niile site na nkwupụta ọjọọ.
Adreesị trolls na vidiyo gị
Ọ bụrụ na ị na-agwa ezi trolls na vidiyo gị n'echeghị ka ha mee njem mbụ, ị ga-enwe ọmịiko nke ndị na-ege ntị. Ha ga-aghọta na okwu ọjọọ ha na-ahụ abụghị ihe ọzọ karịa trolls.
Ọ bụrụ na ọ na-esiri gị ike ịmalite ọnụnọ YouTube gị, SoNuker nwere ike inyere gị aka ịchọta ntụziaka. Site na ngwaọrụ na njirimara anyị, akaụntụ YouTube gị ga-eto n'ọ̀tụ̀tụ̀ na-enweghị atụ ma buru azụmahịa gị n'ọ̀tụ̀tụ̀ dị elu.
Otu esi emeso ndị debanyere aha siri ike na akaụntụ YouTube azụmahịa gị nke ndi dere SoNuker, 19 January 2022
YouTube bụ 'ikpo okwu' a ga -anọ ma ọ bụrụ na i chere na vidiyo bụ eze. Igwe ihe nkiri vidiyo a ugbu a nwere ọkara nke ndị bi n'ụwa na -abanye kwa ọnwa iji nweta ọgwụ mmekọrịta ha…
Usoro maka ndị na-emetụta Nano iji too ntọala ndị debanyere aha YouTube ha
Dịka onye nano mmetụta na YouTube, ohere itolite na ime nke ọma enweghị njedebe. Ihe ị chọrọ bụ atụmatụ siri ike na ọtụtụ ọrụ siri ike. Ihe ịma aka kasịnụ nke ndị nano mmetụta na-eche ihu bụ…